गर्भवती महिलाले ध्यान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? | NepalDut
गर्भवती महिलाले ध्यान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
कार्तिक १७ गते २०७६
गर्भावस्थामा महिलाहरु अनेकन शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनबाट गुजि्ररहेका हुन्छन् । यस किसिमको परिवर्तनले उनीहरुमा भय पैदा गर्न सक्छ, चिन्ता पैदा गर्न सक्छ । मनमा विभिन्न शंका-उपशंका पैदा हुन सक्छ ।
प्रसूतिको समयमा कति पीडा खेप्नुपर्ला ? जन्मने बच्चा कति स्वस्थ्य होला ? इत्यादि कुराले पनि उनीहरुको मन स्थिर रहन दिदैन । त्यसैले यी मानसिक तनाव हटाउनका लागि गर्भावस्थामा ध्यान अर्थात मेडिटेसन आवश्यक हुन्छ ।
रसूतिको समयमा कति पीडा खेप्नुपर्ला ? जन्मने बच्चा कति स्वस्थ्य होला ? इत्यादि कुराले पनि उनीहरुको मन स्थिर रहन दिदैन । त्यसैले यी मानसिक तनाव हटाउनका लागि गर्भावस्थामा ध्यान अर्थात मेडिटेसन आवश्यक हुन्छ ।
ध्यान यस्तो विधी हो, जसले मानसिक रुपमा हामीलाई स्वस्थ्य तुल्याउँछ । शान्त तुल्याउँछ । मनका अनेक विकार हटाइदिन्छ । साथसाथै शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ ।
ध्यान अभ्यास गर्नाले मन शान्त हुन्छ । प्रसूतिको समयमा सहज अनुभव हुन्छ । गर्भको बच्चामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
कसरी गर्ने ध्यान ?
आरमदायक स्थानमा बस्नुपर्छ । ठाउँ खुला वा ताजा हावा आउजाउ गर्ने हुनुपर्छ । होहल्ला, दुर्गन्ध नभएको ठाउँ राम्रो हुन्छ ।
आरमदायक ढंगले बसेपछि गहिरो सास लिने । एकछिन सार रोक्ने । यो अभ्यास नियमित गरिरहनुपर्छ ।
सास लिइरहँदा आँखा बन्द गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण ध्यान आफ्नो श्वासप्रश्वासमा लगाउनुपर्छ । सास लिएको र छाडेको अनुभूत गरिरहुनुपर्छ । यो अभ्यास नियमित र एउटै लयमा गर्नुपर्छ । क्रमस गहिरो सास लिनुपर्छ ।
गहिरो सास लिएपछि एकछिन रोकेर छाड्नुपर्छ । श्वासप्रश्वासमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गराउनका लागि केही आवाज पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तो कि ओम ।
यसरी नियमित रुपले र सही ढंगले ध्यान गरिरहँदा गर्भमा भएको बच्चालाई राम्रो प्रभाव पर्छ । साथसाथै गर्भवती महिलाको मन पनि स्थिर र शान्त हुन्छ ।